Zabaleta Digniin : Manchester City Waa Inaanaan Xataa Barbar dhac Ka Ogolaan Liverpool
Pablo Zabaleta ayaa ugu baaqay xidigaha ay Manchester City u wada ciyaaraan , inay ka digtoonaadaan kulanka Axada , kuna booriyey in guul ay Liverpool ka gaadhaan oo kali ahi ka xigto Horyaalka.
Difaacyahanka reer Argentina ayaa diidan in xataa barbar dhac ay la gallaan Liver ay ku keeni karto dhibaato ka qabsata hiigsigooda hogaanka horyaalka Ingiriiska, una arka Kulanka Anfeild inuu yahay furaha guusha, sidaas darteedna ay tahay in laacibiinta City culayska saaraan kaliya guul.
“Waa inaan tagnaa oo isku daynaa inaan guulaysano kulanka Liverpool,” ayuu ciyaaryahankan 29 jirka ahi ku yidhi , war lagu baahiyey shabakada internetka ee khaaska u ah Man City.
“Waxaa noo baaqi ah todoba ciyaarood oo adag, laakiin waxaan ognahay inay tahay (Liverpool) naadi dagaal xoog badan ugu jira horyaalnimada. Taas ayaana ciyaarta sii adkaynaysa; waa inaan meel ku hubsanaa guul aanu ka gaadhno oo kaliya.”
“Waynu eegi doonaa haddii kooxo kale dhibco fiicaan urursadaan, laakiin arinka ugu muhiimsani waa inaan guulaysano,”ayuu yidhi.
Yaya Toure ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee wakhti ka badan inta Zapaleta u saftay City, xidiga reer argentina wuxuu maanka ku hayaa muhiimada ciyaaryahan Toure ee ciyaarta Anfeild, kaas oo ku sigtay in casaan la siiyo kadib markii uu xanaaqad fool xun sameeyey kulankii Southampton.
“Waa noo laf-dhabar aanaan ka maarmin,” ayuu Zapaleta yidhi , waxaanu intaas ku daray. “Guuldaro weyn ayay noo ahaan lahayd haddii aanu waayi lahayn isaga ciyaar ta Liverpool oo kale ah.
“Wuxuu in yar kaga baxsaday huruud labaad oo la siiyo nasiib wanaagse lama siinin.”
Mesut Ozil Oo Kalidii Is Amaanay
Tartanka Dhallinyarada Cuslaatay Oo Ka Furmay Garoonka Obsiiye Ee Xaafadda Jigjiga Yar
Mustaqbalkayga Wali Go’aan Kamaan Gaadhin – Benitez
Masuul Ka Tirsan FIFA Oo Booliska Isku Dhiibay
Graziano Pelle Oo Laga Eryey Xulka Talyaaniga Iyo Sababta
Ciyaaryahan ka bad-baaday shilkii diyaaradda Kolombiya oo la filayo inuu Dib garoomada ugu soo noqdo